भूवनको नजरमा के हो मिस्टर नेपाली ? « Mazzako Online
भूवनको नजरमा के हो मिस्टर नेपाली ?
अभिनेता भूवन केसीलाई नकारात्मक भूमिकामा चित्रण गरिएको फिल्म मिस्टर नेपाली कात्तिकको २९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो फिल्ममा अभिनेता केसी नकारात्मक भूमिकामा देखिदैछन् । फिल्मलाई देव भुषालले निर्देशन गरेका हुन् । प्रेमराज दाहाल फिल्मका निर्माता हुन् ।
अभिनेता केसीले फिल्म मिस्टर नेपाली राष्ट्रियताले भरिएको फिल्म भएको बताएका छन् । उनले भने–‘यो राष्ट्रियताले भरिएको फिल्म हो । दर्शकले मेरो भूमिका मन पराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ फिल्म मिस्टर नेपालीमा कमेडी, प्रेम, देशको माया सबै भएको उनले बताए । विदेशमा बसेपनि देशप्रेम मर्दैन भन्ने कथामा फिल्म बनेको भूवनले बताए ।
फिल्म मिस्टर नेपालीमा साहिल श्रेष्ठ, कुसुम राउत लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । अभिनेता केसीले आफूलाई आफ्नो भूमिका मन परेपछि आफूले गरेको सुनाए । निर्देशकले कथा सुनाएपछि भूमिका मन परेर गरेको उनले सुनाएका छन् ।
मिलनको मेगा प्रोजेक्ट ‘गोर्खा वारियर’ को टेस्ट टिजर सार्वजनिक (भिडियो)
अनमोल मौन (भिडियो)
किन साम्राज्ञी चुपचाप ? (भिडियो)
पूजाको लकडाउनमा पनि यस्तो चर्चा (भिडियो)
मनिषालाई गरेको अतिरञ्जित प्रति पूजाको आपत्ती